Abaholi bamabandla - Sikunye
Abaholi bamabandlaIvo Kittel2021-03-08T17:16:02+02:00
Ibandla lakho lingenza umehluko omkhulu ekuboneni izingane zifinyelela ezingeni elizinikezwe nguNkulunkulu.
Njengomholi webandla, siyazi ukuthi usuvele ukholelwa ukuthi isonto lendawo lingumphakathi onamandla.
Lapho ubona lokho odokotela abasitshela khona ngokuthi izingane zikhula kanjani, lapho ubheka lokho iBhayibheli elisitshela khona ngenhliziyo kaNkulunkulu ezinganeni ezincane nalapho ubheka lokho ibandla lakho elingakwenza, uzobona ithuba elimangalisayo: ibandla lakho lingadlala ingxenye ebalulekile ekuboneni zonke izingane zifinyelela emandleni ezinikezwe nguNkulunkulu.
Siyazi ukuthi uthwala lonke ibandla enhliziyweni yakho. Asilindele ukuthi abaholi bamabandla benze yonke into, noma kube yibo kuphela abantu abasekela imindeni, kodwa kunezinto abaholi bamabandla abasesikhundleni esihle kakhulu sokwenza. Siveza ezinye izinyathelo ezingezansi ezingaqondisa izinyathelo zakho ezilandelayo njengoba uhlola ukuthi ungayisiza kanjani imindeni enezingane ezincane.
Isinyathelo Esilandelayo Sabaholi Bamabandla
Thola ugqozi ngokuthi ibandla lakho lingabamba iqhaza kanjani ekunikezeni zonke izingane isiqalo esiqinile sempilo. Uma ungakakwenzi lokho, siphakamisa ukuthi uqale ngokuya (futhi ukhuthaze omunye umholi ebandleni lakho) ama-webinars eBandla lethu nasekuqaleni kwempilo nokuhlola okwengeziwe ngombono omkhulu nokuthi kusho ukuthini ‘FTD friendly’.
Phaphamisa ibandla lakho ukwazi ukufinyelela uhla lwemicimbi nokuqeqeshwa kwakho nabahlanganisi bakho. Lokhu ukuzibophezela ekuthatheni izinyathelo eziningi ukuxhasa nokuqinisa imindeni ebandleni lakho nangebandla lakho.
Sebenzisa izinsiza zomholi webandla zethu ukuqondisa ezinye zezinyathelo zakho ezilandelayo. Ibandla lakho linamandla futhi lehlukile kwamanye amabandla. Ngale “Khithi Yokuqalisa” esandleni, ungakwazi ukubona ngomkhuleko ukuthi ibandla lakho lingenzani.
Khetha iqhawe le-FTD ukuhola iqembu ngaphakathi kwesonto lakho. Lo ngumuntu osemqoka ongasebenza naye ukuqinisekisa ukuthi akudingeki wenze konke. USikunye usebenza nalaba bangompetha ekuqiniseni nasekusekeleni umsebenzi abawenzayo nasebandleni lakho.
Yenza ibandla lonke libandakanyeke. Siza lonke ibandla ukuthi libone ukuthi lingabamba iqhaza kanjani ekusizeni nasekusekeleni imindeni. Hlola amathuluzi ethu e-FTD-amabandla ukuthola eminye imibono.
Zigcine uxhumekile futhi usekelwa ngokuya kuma-Webinars ethu Wokusekela kanye nemibuthano yethu yeSikunye. Gcina usesikhathini ngokubhalisela incwadi yethu yezindaba, silandela izinkundla zethu zokuxhumana futhi siifunda izindaba zoshintsho ezenzeka emabandleni kulo lonke elaseNingizimu Afrika.